Xonsh: Fampandrenesana baiko Cross-Platform sy Fiteny Shell | Avy amin'ny Linux
Xonsh: Fampandrenesana baikon'ny Cross-Platform sy Fiteny Shell
Linux PostInstall | 05/04/2022 05:30 | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Nitety Internet aho tato ho ato, nitady fampahalalana mahasoa mifandraika amin'ny Scripting Shell. Mba hanavaozana ny kaody amin'ny fitaovana rindrambaiko kely azo ampiasaina dia noforoniko folo taona mahery lasa izay. Fampiharana izay tamin'izany fotoana izany dia nantsoina Linux Post Install - Bicentennial Script (LPI-SB), ary noforonina tamin'ny Fanentanana baiko mifototra amin'ny Bash. Ary teo afovoan'io fikarohana io aho dia nahita fitaovana na programa mahaliana antsoina hoe "Xonsh".
Ho an'ireo izay mbola tsy nandre momba ity fampiharana ity dia tsara ny manamarika fa fitaovana tsara ho an'ny rindrambaiko terminal fanolorana a fiteny akorandriaka ary a Fampandrenesana baiko cross-platform izay miasa miaraka Python.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra androany ny Terminal fitaovana sy ny fampiasana, ary indrindra momba ny fampiharana mahasoa antsoina hoe "Xonsh", avelao ho an'ireo liana ireto rohy manaraka ireto ho an'ny sasany Lahatsoratra mifandraika. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"Shell Scripting dia teknika (fahaizana) amin'ny famolavolana sy famoronana Script (rakitra automation amin'ny asa) amin'ny alàlan'ny Shell (tsara kokoa) amin'ny Rafitra Operating, na Editor Text (Graphic na Terminal). Ity dia karazana fiteny fandaharana izay adika amin'ny ankapobeny. Izany hoe, raha ny ankamaroan'ny fandaharan'asa dia natambatra (nafenina), satria niova fo tanteraka ho kaody manokana (manokana) alohan'ny hanatanterahana azy ireo (fizotry ny fanangonana), ny script shell dia mijanona amin'ny endriny voalohany (ny loharanon-kaody amin'ny endrika lahatsoratra) ary adika amin'ny alalan'ny baiko isaky ny vonoina izy ireo". Shell, Bash ary Scripts: Momba ny Shell Scripting
Loharano sy fitaovana ampiasaina amin'ny Internet hianarana Scripting Shell
1 Xonsh: Shell for Bash, Python ary maro hafa
1.1 Inona no atao hoe Xonsh?
1.2.1 Sarin'ny sary
Xonsh: Shell for Bash, Python ary maro hafa
Inona no atao hoe Xonsh?
Araka ny anao tranokala ofisialy, ny fampiharana "Xonsh" Ity dia faritana fohifohy toy izao:
"Izy io dia akorandriaka ampiasain'ny Python. Fiteny akorandriaka miampita sehatra sy baiko avy amin'ny Python. Ny fiteny dia superset an'ny Python 3.6+ miaraka amin'ny akorandriaka fanampiny izay zatra anao avy amin'ny Bash sy Python. Izy io dia miasa amin'ny rafitra lehibe rehetra ao anatin'izany ny Linux, OSX ary Windows. Xonsh dia natao hampiasaina isan'andro amin'ny manam-pahaizana sy ny vaovao".
Na izany aza, nampian'izy ireo izany niaraka taminy:
"Ny mpampiasa terminal rehetra dia afaka mampifangaro mora foana ny baikon'ny Python sy Shell (toy ny Bash) amin'ny fomba fiasa mahery vaika sy tsotsotra.".
Izay amin'ny teny tsotra dia midika hoe rehefa manatanteraka "Xonsh" atolotra antsika Shell na tontolo manodidina izay azontsika atao manaova baiko tsotra roa como el Fampandrenesana baiko Bash Shell Complex amin'ny Python. Izay mety ho tena ilaina, na ho an'ny SysAdmin sy Devs, ary koa ho an'ireo mpankafy terminal sy vao manomboka, na hianatra na hanomboka hiasa.
Amin'izao fotoana izao, "Xonsh" mandeha ho azy dikan-teny farany ny isa 0.11.0, namoaka ny andro 17 / 11 / 21. Ary azo apetraka amin'ny fomba maro, ohatra, amin'ny alàlan'ny console, amin'ny fomba mahazatra miaraka amin'ny mpitantana fonosana mahazatra ampiasaina amin'ny GNU/Linux Distro tsirairay, toy ny ataon'ny mpitantana. python pip, na amin'ny alàlan'ny rakitra AppImage na mampiasa Docker.
Anisany toetra na fiasa ankapobeny manana ireto manaraka ireto:
Mamela anao hanambatra ny baiko Shell (Bash) amin'ny Python na ny mifamadika amin'izany.
Izy io dia mamela ny fampiasana ny fanitarana antoko fahatelo, ny xontributions na ny xontribs, izay tsy inona fa fitaovana iray sy fivoriambe hanitarana ny fiasan'ny xonsh.
Izy io dia manolotra interface tsara amin'ny resaka fitantanana tantara, satria mamorona rakitra tantara miaraka amin'ny rafitra manankarena sy metadata ary API hifaneraserana amin'izy ireo.
Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana haingana mahery vaika amin'ny alàlan'ny famitana tabilao, famatorana fanalahidy, ary loko azo zahana namboarina tamin'ny alàlan'ny default.
Raha, amin'ity Ny dikan-teny farany amin'izao fotoana izao dia nisy endri-javatra vaovao nampidirina, toy ny:
Fanampin'ny fikambanan'ny fanalahidy CTRL-Right mba hamenoana teny tokana amin'ny autosuggestion.
Fampisehoana ny karazana sy ny famaritana ny fari-piainan'ny tontolo iainana rehefa vita.
Fanatsarana pip/xpip feno.
Fanampiana ny fanalahidy CTRL-Backspace hamafa teny tokana amin'ny alàlan'ny $XONSH_CTRL_BKSPC_DELETION.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny "Xonsh" Azonao atao ny mitsidika ny fizarana ofisialy ao amin'ny pypi y GitHub, na mivantana ny fizaranao amin'ny tahirin-kevitra y Tutorial, ao amin'ny tranonkalany ofisialy.
Amin'ny tranga misy antsika, aorian'ny fametrahana ny baiko «sudo apt install xonsh» ary ny manaraka «sudo pip3 install prompt_toolkit», afaka nanomboka nanatanteraka izany izahay ary manoratra baiko Bash sy Python iray monja Shell, araka ny aseho etsy ambany:
Mandeha ny Xonsh Shell
Bash Command Ohatra
Ohatra baiko Python
Farany, hijery lahatsoratra bebe kokoa momba ny Shell Scripting ao amin'ny FromLinux azonao atao ny manindry ireto manaraka ireto rohy. Ary raha mahaliana anao ny mahita ny fampiharana izay namboariko miaraka bash madioManoro hevitra anao aho hankany amiko Fantsona YouTube ary jereo ny video momba ny Linux Post Install – Automated Optimization Script (LPI-SOA).
Raha tsorina "Xonsh" fitaovana tsara io rindrambaiko terminal (CLI). Ankoatra izany, dia tena ilaina ho an'ireo tia Manaova script na manaova Shell Scripting, tsy momba ny Bash fa momba Python, ankoatra ny hafa (Zsh, trondro ary Plumbum). Noho izany, manantena izahay fa fitaovana mahaliana tohizo ny fivoarana ho tombontsoan'ireo izay mazoto Mpampiasa GNU / Linux, ary Terminal.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Xonsh: Fampandrenesana baikon'ny Cross-Platform sy Fiteny Shell
Rehefa afaka 15 volana dia tonga ny kinova vaovao xfce4-terminal 1.0.0
Nankatoavin'ny mpamorona Debian ny mety hisian'ny fifidianana miafina